IST – Antananarivo: hatsangana ny lalam-piofanana momba ny rafitrano | NewsMada
IST – Antananarivo: hatsangana ny lalam-piofanana momba ny rafitrano
Hatsangana eo anivon’ny IST (Institut supérieur de technologie) ny lalam-piofanana momba ny rafitrano (architecture). Mbola tsy ampy betsaka ny teknisianina momba izany rafitrano izany eto amintsika, araka ny feo avy any amin’ireo mpandraharaha mpanao trano. « Efa hatramin’ny ela ny noheverana azy io, saingy izao vao feno ireo fepetra manaraka ny fenitra iraisam-pirenena hananganana izany », hoy ny tale jeneralin’ny IST, ny Pr Rakotomalala Jean Lalaina.
Hita tokoa eo amin’ny sehatry ny fanaovan-trano fa mbola betsaka ny asa kitoatoa nefa iantohan’ireo mpandraharaha, ary vitsy ireo trano fiantohana sahy miantoka ny asan’ireny mpandraharaha ireny. Na misy aza, lafo ny fiantohana noho izay tsy fahafenoan’ny teknika tsy manara-penitra izay. Matetika koa, araka ny fanamarihana avy amin’ny holafitry ny mpahay rafitrano, tsy ampy fanaraha-maso ny asa na ny tompony ihany, tsy nianatra momba izany no manaiky izay asa vita eo.
Misy ny fiaraha-miombon’antoka amin’izao fanokafana lalam-piofanana vaovao izao, iarahana amin’ny holafitry ny mpahay rafitrano sy ny teknisianina avy any Belzika. Tokony ho fantatry ny tanora ny fisian’izao, azo lazaina fa malalaka ny tsenan’asa eto amintsika, mba tsy hivangongo any amin’ny lalam-piofanana tsy ahitana asa firy intsony izy ireo.